Kedu protein dị mma maka mgbake akwara? - Ihe Oriri
Isi > Ihe Oriri > Mgbakwunye protein maka mgbake ahụ ike - ngwọta na-adịgide adịgide
Mgbakwunye protein maka mgbake ahụ ike - ngwọta na-adịgide adịgide
Kedu protein dị mma maka mgbake akwara?
Otu nnyocha gosipụtara nzaghachi anabolic dị mma mgbe ndị sonyere riri gram 20 nke wheyproteintupu mmega ahụ (9). Ndị ọzọurunke iri nriproteintupu mmega gụnyere: Ammanzaghachi anabolic, ma ọ bụakwaraeto (11, 12) Mmamgbake akwara(12)
Ma ị bụ nwoke ma ọ bụ nwanyị, enwere ike ịgwa gị na iji nweta ọtụtụ mgbatị ahụ, ịchọrọ protein. Na ọ bụghị naanị gị na mgbatị ahụ na-eji mgbakwunye protein. Na 2017, $ 9.4 ka ejiri nọrọ na protein whey n'ụwa niile.
Ya mere, protein ntụ ntụ na-enyere aka iwulite ahụ ike ma ọ bụ mee ka ego gị ghọọ ájá? Ka anyị kwuo maka otu ahụ gị si eme ka protein nwee ike ịkwalite mọzụlụ, ma ọ bụrụ na protein emee ka anya doo gị na - enyere gị aka inweta ọtụtụ ọzụzụ ọzụzụ. Nabata na DocUnlock ebe anyị nwere ike inyere gị aka ịme mkpebi ahụike ka mma. Kedu ka aru gị si arụ akwara mgbe ọ gbasara ịmụba akụkụ ọ bụla, ahụ nwere naanị nhọrọ abụọ: ma ị nwere ike ịbawanye ọnụ ọgụgụ sel, a na-akpọ hyperplasia.
Ma ọ bụ i nwere ike ime ka mkpụrụ ndụ nke ọ bụla bukwuo ibu, nke a na-akpọ hypertrophy. Abịa n’ịrụ sel akwara ọhụrụ, ahụ gị enweghị ike iwulite sel akwara ọhụrụ, yabụ ahụ gị na-adabere na hypertrophy muscle. Kedu ka hypertrophy muscle si arụ ọrụ? na akwara muscle na n'okpuru microscope ị nwere ike ịhụ ogologo tubes nke eriri ndị na-agba ọsọ na sel.
Ndị a na-akpọ myofibrils na jupụtara protein emep uta eri. Dika cell akwara na ewulikwu otutu protein protein a, o na abawanye ma sie ike. Iji nweta hypertrophy nke anụ ahụ, enwere iwu dị mfe: njikọ protein muscle (MPS) ga-akarị mmebi protein muscle (MPB).
Na iji kpalite njikọ protein, ị ga-achọ ihe abụọ: ọzụzụ ọzụzụ na protein site na nri gị Ọ bụrụ na ahụ gị anaghị enweta protein zuru oke site na nri gị, ọ gaghị enwe ike ịkpalite njikọta protein protein. Na nke a bụ ndụmọdụ iji tinye protein na nri gị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-azụ ọtụtụ ibu. Imirikiti ndị bi na mba ndị nwere nnukwu ego na-enweta protein zuru oke site na nri ha maka ịrụ ọrụ ahụ.
Mana anyị maara na mkpa protein dị elu karịa ndị mmadụ na-ama ụma na-anwa iji nweta hypertrophy muscle. Ma ịgbakwunye protein ntụ ntụ na nri gị na-enyere gị aka? nweta nsonaazụ kacha mma site na ike ọzụzụ? E meela ọtụtụ ọmụmụ ihe n’isiokwu a! Ọ bụrụ naanị na enwere nyocha meta nke na-adọta nsonaazụ niile ọnụ iji nweta azịza kacha mma. Ehee HAH! Chọta! E bipụtara 2017 na British Journal of Sports Medicine Nke a bụ nyocha kachasị ukwuu mana ma ntinye protein na-eduga na mmụba nke akwara na ike.
Ọ na-agwakọta nsonaazụ nke nnwale 49 enweghị usoro. N'ime ọmụmụ ihe ndị a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ 2,000 ka a na-enye ọzụzụ ike. N'ime ndị a, nkezi protein oriri tupu mgbakwunye bụ ihe dị ka gram 1,4 nke protein kwa kilogram kwa ụbọchị, nke dị ugbu a karịa ọgwụ a na-atụ aro kwa ụbọchị nke gram 0.8 kwa kilogram kwa ụbọchị.
Otu ikpe a natara mgbakwunye protein na-agbakwunye gram 36 kwa ụbọchị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ule na-eji protein whey. Ndị na-achịkwa otu na-enwetakarị mgbakwunye carbohydrate iji hụ na mkpokọta calorie bụ otu ihe ahụ na otu nnwale ahụ. Ogologo usoro mmegide bụ izu 13 na mgbatị 3 kwa izu.
Ná nkezi, usoro ọzụzụ ọ bụla nwere mmega 7, usoro 4 kwa mmega ahụ, yana ugboro ugboro iteghete kwa otu. Nsonaazụ ahụ? Mgbakwunye protein na-eme ka ike, ogo ahụ, na ahụ ike dị arọ. Ya mere na ị gaghị egbusi ego gị, mgbakwunye protein na-abịa na ọtụtụ elele.
Ma chere - enwere azụ. Nke mbu, enwere isi ebe itinye protein karie adighi aba uru. Ndị nnyocha ahụ chọpụtara na uru nke mgbakwunye protein na-ebupụta mgbe ngụkọta kwa ụbọchị nke gram 1.6 nke protein kwa kilogram kwa ụbọchị.
Maka onye na-eri kilogram 70, nke a ga-apụta mkpokọta protein na-eri site na nri na mgbakwunye nke gram 112 kwa ụbọchị. Na nke abụọ, ebe ntinye protein nwere uru, ọ bụghị ihe ịtụnanya dịka ị nwere ike iche. N'ihe banyere imeziwanye ya Ike gara, ndị sonyere na-anaghị edozi protein na-enweta ihe dịka 30 pound nke 1 rep karịa site na ike ọzụzụ naanị.
Ndị na-ewere ihe mgbakwunye protein nwere mgbakwunye 2.49 pound. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, mgbakwunye protein ahụ nyere naanị uru ọzọ nke 9%.
Kedu ihe nke ahụ pụtara? 'Ọfọn, ndị na-eme nchọpụta na-akọ akụkọ kachasị mma:' trainingme ọzụzụ ike bụ ihe mkpali dị ike karị maka ịbawanye ike ahụ ike karịa ịgbakwunye protein nri. ”Ọ bụrụ na ị bụ ọkachamara na-eme egwuregwu ebe ọ bụla ikpeazụ bit nke ike dị, mgbe ee, Kachasị gị protein oriri nnọọ. Maka ndị na-eme egwuregwu na-eme egwuregwu, ọmụmụ ihe a na-atụ aro ịba ụba protein na njedebe nke 2.2 gram kwa paụnd kwa ụbọchị iji nweta uru kachasị na mgbakwunye protein.
Ma ọ bụrụ na ị bụ onye dịkarịa ala dị ka m, gbalịa ịkwado nke ọma, mgbe ahụ protein na-eme ka ị maa jijiji ga-enyere gị aka ntakịrị, mana ọ bụghị nke ukwuu, dị ka ịga mgbatị ahụ na ịrụ ọrụ ahụ n'ezie. Ya mere oge ọzọ ị ga-ahụ onye nọ na mgbatị ahụ, someụọ protein, ezigbo ajụjụ bụ, hey nwanne, ị na-arụkwa ọrụ? N'isiokwu a, m nọ na-ele mmetụta nke mgbakwunye protein na ọzụzụ ike. E nwere ihe ndị ọzọ kpatara ndị mmadụ ji eme ka ụjọ mee: ịbawanye nri protein na-enweghị irikwu ọtụtụ calorie, iji gbochie agụụ, ma ọ bụ iji nyere mgbake post-cardio.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'okwu ndị a, dobe anyị ahịrị dị n'okpuru, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ndụmọdụ a kapịrị ọnụ banyere ọnọdụ gị na nri protein, m ga-atụ aro ka ị gakwuru onye na-edozi ahụ egwuregwu. Nchegbu a na-echekarị banyere nri protein dị elu bụ ma ọ ga-emetụta ahụike gị n'ụzọ na-adịghị mma Dịka ọmụmaatụ, nri protein dị elu ọ nwere ike ibute ọrịa akpukpo ahụ, ntutu isi, ma ọ bụ mmebi akụrụ? Na ọzọ na-esonụ, Aga m na-achọ na sayensị n'azụ ajụjụ ndị a, ya mere, jide n'aka na ị denye aha na nke a na isiokwu ga-anọ n'elu aka nri n'akụkụ mgbe a tọhapụrụ ya. Daalụ maka ikiri na ịhụ gị ọzọ.
Protein whey ọ dị mma maka nrụzi akwara?
Ọtụtụ ọmụmụ kọrọ naprotein wheyMmeju mgbe ihe omumu bụbara uruikwadomgbakesite na ịba ụbaproteinnjikọ na mbenataakwarammebi (Buckley et al. 2010; Cooke et al. 2010).Ọgọst 29 2017
Ndi protein na-enyere aka imezi ahụ ike?
Keduna-emezi proteinma wughachiakwara?Proteinmejuputara amino acid, nke na aru dika ihe eji ewu ihe n’ahu. Mgbe ị na-eri nriproteinmgbe ihe omumu, ọ na-enye gịmọzụlụihe amino acids mkpa kammezima wughachi.
Protein ọ na-ebelata mgbu akwara?
Proteinenyere aka iwusiakwaraemep uta eri nke adọwaworo mgbe ngosiputa, na-agbanye mmanumọzụlụnambenatammetụta nke oge na-egbu ogemgbu mgbu. Mgbe mgbatị ahụ gasịrị, ị ga-eriprotein-ba nri ma ọ bụ ihe ọ drinksụ drinksụ nagbochie akwara mgbuma nyere aka rụzie, mmezi na uto nkemọzụlụ.
Mmiri ara ehi ọ dị mma maka mgbake akwara?
Mmiri araaugments post-emega ahụakwaranjikọ protein na rehydration, nwere ike inye aka na mgbatị mgbatị glycogen resynthesis, ma na-emega mgbatị ahụakwaraọnya mgbu / ọrụ funahụrụ ya.Ọkt 31 2018
Ime protein emee ka anya doo ndị ọzọ?
Protein emee ka anya dookwaliteuru uruma melite arụmọrụ na mgbake. Ha na-egbochiakwaramfu na ọ pụrụ ọbụna inye akadịkwuo akwarauka n'oge ibu ibu.13bọchị 13 2020
Ndi protein na-enyere gị aka ịgwọ ngwa ngwa?
Keduna-enyere protein akana ọnyana-agwọ ọrịa?Ahụ gịmkpaprotein iji nyere akawuo ma mezie akwara, akpụkpọ, na anụ ahụ ndị ọzọ.ProteinỌzọkwana-enyere akaagha ọrịa, edozi mmiri mmiri, ma buru oxygen site naahụ gị. Mgbe olegịnwee ọnya nke ahụna-agwọ ọrịa, na-eche nri dị ka ọgwụ.
Ndi protein na-eme ka mgbake ahụ dị ngwa?
Nnyocha ndị gara aga egosila naproteinnwere ike belata ọnya,gbasie ike, ma nyere akammeziihemọzụlụndị na-adọwa n'oge ibuli elu. Ọzọkwa, otu nnyocha banyere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọmụmụ 50 chọpụtara naproteinsupplementation ukwuu enwekwukwaakwaraike na nha n'oge ọzụzụ iguzogide.Sep 9 2019
Otu iko mmiri ara ehi zuru ezu mgbe emechara ahụ?
Nke a bụ n'ihiproteinemere amino acid nke n’enye aka na oganihu n’ime arumgbe emechara ahụ. Dị ka ezigbo isi iyi nkeprotein, na-a drinkingụ mmanyammiri arabụkwa ụzọ dị mfe iji napụta ndịproteinmgbe akwara gị chọrọ ya nke ukwuu, na-enyere ha aka itolite ma meziemgbennọkọ mgbatị ahụ siri ike.
Kedu ihe kachasị mma maka mgbake ahụ ike?
Gbatị bụ n'etitimgbake akwara kacha mmausoro maka ndị na-eme egwuregwu n'ihi na ọ na - eme ka ọbara na - aga nke ọmamọzụlụa na-agbatị. N'ụzọ dị otú a, ọ na-agba ọsọ ọsọmgbakeusoro site na ikwe kamọzụlụiji nweta ngwa ngwa inweta nri ndị ha chọrọ.June 6. 2015 g.
Kedu ihe kpatara ị chọrọ protein na mgbake mgbake?
N'ụzọ bụ isi, ịchọrọ protein (na amino acid dị na ya), na carbohydrates. Protein na-enyere aka wughachi na mezie akwara mebiri emebi. N’ezie, akwara gị nwere ihe dịka 25% protein. Mkpụrụ na-adọrọ adọrọ ngwa ngwa, dị ka whey protein powder, kachasị mma, n'ihi na ọ na-akụda ọbara gị ngwa ngwa, ma na-arụ ọrụ na-agwọ ahụ ike gị ngwa ngwa.
Nri protein nwere ike inye aka na mgbu mgbu?
Otú ọ dị, ọ dịghị ihe dị iche na nzaghachi mgbake na ọnụọgụ dị n'etiti ìgwè atọ dị iche iche. Nke ahụ pụtara, ndị edemede ọmụmụ ahụ kwubiri, na ọ nweghị uru ọzọ na -ewe protein ma ọ bụ ihe ọ drinksụ drinksụ na-aba n'anya maka mgbake ahụ ike.
Kedu nke ka mma maka ahụ ike ụlọ na-eme ka anya doo ma ọ bụ ihe ọ sportsụ sportsụ egwuregwu?
Mana ọmụmụ ọhụrụ sitere na Mahadum United Kingdom nke Lincoln na-atụ aro na ịmị protein adịghị arụ ọrụ nke ọma na iwughachi akwara ma na-akwalite mgbake karịa mmanya ọ drinksụ highụ dị elu, dị ka ihe ọ sportsụ sportsụ egwuregwu.